Photos tirtiray Notes!
2.4 Ladnaansho Video ku Notes
2.5 Transfer Data si iPhone 7 / 6s
Edge 2.6 iPhone 7 / 6s VS Samsung Galaxy qod6
Photos tirtiray Notes! Sidee inuu ka soo kabsado?
App Notes cusub ee macruufka 9 yimaado iyadoo tiro ka mid ah qaababka cusub oo cajiib ah in loo xidho si ay u bedesho sida aad abaabulo iyo qorshaha. Qaar ka mid ah qaababka ay ugu ka hadlay waxaa ka mid ah kuwa soo socda;
Iyadoo app New Xusuusaha, Apple ayaa waxay awood abuurka fayl cusub oo ka dhigtay in ay inta badan ka sahlan si aad u dhaqaaqo qoraalo ka mid folder in kale.
A interface cusub uqaabaynta ayaa u suurta geliyay in aad aragto thumbnails qoraaladaada
The toolbar cusub formatting waxay sahlaysaa in la saxaa qoraalkaaga
Waxaad ku dari kartaa liis hubineed ee soo galay qoraalkaaga.
Waxaad sawiri kartaa sawir si toos ah qoraalkaaga
Waa sahlan tahay in lagu daro sawiro iyo videos la Notes app cusub
Waxa kale oo aad ku dari kartaa xiriirka web iyo maps in qoraalkaaga
Dhibaatadu waxa ay tahay in Apple weli waa in la helo xal u yahay waxa la sameeyo marka aad si qalad ah ay tirtirto ama bartey lumin video ama sawir lifaaqa ah. Nasiib wanaag, waxa jira hab inuu ka soo kabsado files kuwaas oo sida aynu arki doonaan in this article.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ku lifaaqan video in Note on iPhone
Si ay u soo kabtaan video tirtiray lifaaqa, aad doonaysid in aad u baahan tahay codsi ah in takhasusay soo kabashada. Wixii qalabka macruufka codsigan waa ka badan Wondershare Dr. Fone kale ma jiro. Wondershare Dr. Fone ayaa loo magacaabay 1aad iPhone iyo World ee iPad Data kabashada software. Qaar ka mid ah qaababka ay ka mid ah;
Si buuxda u la jaan qaada Windows 10, Lugood 12, macruufka 9.
Soo celisay xog muhiim ah oo ay ku jiraan farriimo tirtiray, sawiro, xiriirada, videos, iyo kuwo kale oo badan ka iPhone, iPod taabto ama iPad.
Kabsado macluumaadka xitaa haddii khasaaraha ka dhashay musuqmaasuqa ah OS
Kuu ogolaanayaa inaad doorato files ee aad jeclaan lahayd inuu ka soo kabsado
Shaqeeyaa si uu u xaliyo nidaamka qalliinka ee iDevices ah
Sidee inuu ka soo kabsado Notes Video lifaaqa ka gurmad Lugood
Tallaabada Koowaad: download iyo rakibi Wondershare Dr. Fone in aad PC. Burcad barnaamijka oo guji "kabsado file kaabta Lugood." Barnaamijkan ayaa lagu ogaan doonaa oo dhan laga heli karaa Lugood gurmad files iyo u muujiyaan in uu furmo.
Waxaad dooran kartaa gurmad ugu dambeeyey sida ay "Latest taariikhda kaabta" qoondeeyey kasta.
Tallaabada Labaad: Marka aad soo xulay gurmad ay ku jiraan video file aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan ka, guji "Start Scan". Waxay qaadan kartaa qaar ka mid ah markii lagu soo saaro dhammaan xogta ee in si gaar ah gurmad file si samir.
Talaabada Sadexaad: Marka Scan la dhammeeyo, dhammaan xogta ku jirta faylka gurmad la soo saaro doonaa oo habeeyay qaybaha. Waxaad markaa dooran kartaa file saxda video aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan oo guji "bogsadaan."
Talaabada Afraad: Dooro hadii aad rabto in aad soo kabsado si aad u computer ama qalab aad. Haddii aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan in qalab aad, xirmaan qalabka si your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB.
Sidee inuu ka soo kabsado Notes video lifaaqa ka kaabta iCloud
Talaabada Koowaad: Ka dib markii carar Dr. Fone, guji Waxaad la keeneen in doonaa inuu soo galo username account iCloud iyo password "ka soo kabsado iCloud files ee kaabta.".
Tallaabada Labaad: Marka aad saxiixay in iCloud, barnaamijka wuxuu muujin doonaa oo dhan oo ka mid ah laga heli karo iCloud files gurmad in aad xisaabta. Dooro mid aad rabto in aad soo kabsado file video ka dibna riix on Download. Waxaad isticmaali kartaa "Latest gurmad taariikhda column" si aad u hesho gurmad aad raadinayso.
Tallaabada Saddexaad: furmo gujisid uu u dooranayo faylasha aad doonaysid inaad kala soo baxdo. Xaaladdan oo kale waa file tirtiray video in aad ku lifaaqan Notes. Marka aad leedahay, riix "Scan" badhanka si ay u bilaabaan. Habka ay qaadato waqti si samir.
Talaabada Afraad: mar scan la dhammeeyo, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan dhammaan xogta ku saabsan iCloud files gurmad la soo xulay. Fiiri iyada oo liiska ahbaa dooro file aad rabto inuu ka soo kabsado, haddii ay taasi waa file video ah. Riix "Ladnaansho" badhanka si loo badbaadiyo file ah in aad damisid.
Haddii aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan faylka si qalab aad halkii aad ka badbaadiyo your computer, xiro qalabka aad si aad u computer inta lagu jiro tallaabo la soo dhaafay.
Sida loo kiciyo iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5
10 Meelaha Habee Photo iPhone Case
iPhone VS Android: Waa kuwee One Ma jeceshahay wanaagsan?
> Resource > iPhone > Photos tirtiray Notes!